IFIININ HAASAWAA IFITTIN HASAASA -
IFIININ HAASAWAA IFITTIN HASAASA
bilisummaa March 21, 2014	Leave a comment
Ifiinin haasawaa ifittin hasaasaa
Kophaa koo guungumeen kuta yaada keessa
Hiriyyoota keessaa kophatti na baasaa
Guyyaa na ceesisaa kophaa na kaachisaa
Narratti wal geeysee halkan yoomin ciisaa
Ifiinin haasawaa ifittin hasaasa.
Takka hin gammadu narratti wal geeysee
Koflee hin beeku zaliilii na buusee
Akka namaan jiru qaama na haphisee
Maluman wallaale yaanni narra marsee.
Barbaadeen dhabe malaa fi furmaata
Kan yaanni itti jiru ifumaan dubbataa
Haala maraatuutu anarraa mul’ataa
Sammuun na jeeqamtee wallaale akkaataa.
Abdii fuula duraaf taa’een mala dhahaa
Tilmaamee shalageen dubbii meeqa foohaa
Na harkaa diigamtii wahin bakkaan gahaa
Yaanni na qirqixee ana keessaa gooha.
Tanin arra jaaru boruma diigamtii
Amma yoon hobbaase boodas haarawatti
Tanin funaanee kuuse gam tokkotti
Adda adda bahuun bakka meeqa taati.
Ifiinin haasawaa na dhibe furmaati
Mala naaf malaa hin usinaa natti.
Namattis makamee wajjiin bu’ee karaa
Amna osoon fixin nin dhaba if biraa
Dubbachuun na dhibe waan sammuu na diraa
Kan silaa naaf yaadee laalu akka firaa
Diina natti ta’ee taane duydaa-garaa.
Bakka tiyya bu’uun osoo agartanii
Silaa waan ustanii ana gargaartanii
Ifiinin haasawaa dhabame furmaanni
Ifittin hasaasaa narra marsee yaanni.
Tan adda facaatee gama gama teessu
Guuree walitti fidee erbellee fayyisu,
Bar waa hin dhabamu kan adda tarsaasu
Ifumaan haasawee fittillee hasaasu,
Ittuman fufa mee hanga bakka geeysuu
Gaafa wal qixxeeysu waaqni haa kaleeysu!
Previous BUQQIFAMA OROMOOTA SHAGGARII fi NAANNOO ISAA – Kutaa Sadaffaa
Next Kibba Afriikaa Keessatti Hiriirro Mormii Guddaan Hawaasa Oromoo fi Ogaadeniin Gaggeefame